वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दलहरु निर्णायक छलफलमा - Nepal Samaj
वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दलहरु निर्णायक छलफलमा
काठमाडौं । राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र वैकल्पिक सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष छलफलमा जुटेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि आज साँझ ५ बजेसम्म सरकार गठन गर्न समय दिएपछि दलहरु छलफलमा जुटेका हुन् । छलफलमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि सहभागी छन् ।
आजै बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा भएको छलफलमा एमाले वरिष्ठ नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव कांग्रेस र माओवादीले गरेका बताइएको छ । त्यसपछि नेपाल तीन दलको बैठकमा सहभागी भएका बताइएको छ ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल, जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी छन् ।
यस्तो छ सम्भावित मन्त्रीहरुको लिस्ट